Staffing ngenxa yebhizinisi
Staffing yakhiwa izinkampani izisebenzi isevisi ejwayelekile olulodwa, bamukela iminyaka engaphezu kwamakhulu amabili edlule. Labor Ikhodi kubonisa nokubhalwa esiyisibopho kwale dokhumenti wonke amabhizinisi ekufezeni imisebenzi yabo endaweni WaseRussia.
Ukuze siqonde ukuthi abasebenzi kudingekile ukuchaza umqondo wegama elithi "umbuso". Ngakho, isimo - iqoqo abasebenzi. Staffing - idokhumenti equkethe uhlu zonke izikhala inkampani inhlangano yayo, inani okuthunyelwe kanye nomholo.
Isici kwanoma iyiphi idokhumenti, okuyinto eyisisekelo yokuphila ibhizinisi - ukubhaliswa kwaso abanekhono. I abasebenzi cap kumele ucacise Igama lenhlangano - egcwele noma esifushanisiwe. Kodwa kusukela ngaleso sikhathi, njengoba livikeleke ibhizinisi ngesinqumo somthetho noma oda Lika Mqondisi. Iqala uhlu izikhundla nomqondisi wenkampani, kulandele isikhundla abaphathi, ochwepheshe kanye nezisebenzi. Uma inkampani izinkonzo eziningi, isakhiwo eziyinkimbinkimbi kakhulu kwakuwukuthi ubunjiniyela kanye nabasebenzi yokusebenza, kungcono ukuze upende isakhiwo idokhumenti yesevisi ngalinye ngokuhlukile. Amagama ukwahlukana kwesakhiwo nazo livikeleke imibhalo olawula umsebenzi wonke ibhizinisi. Uma kuziwa izinhlangano kwezohwebo, amagama ukwahlukana kwesakhiwo ayigcini yinoma yimuphi imingcele. Into kuphela ukuthi kuyinto efiselekayo: ukugwema amagama olunye ulimi, Dissonant noma anzima. A indawo ekhethekile abasebenzi kuthatha uhlu amakhono ukuthi asebenzise noma iyiphi izinzuzo: umhlalaphansi singakashayi isikhathi, izibonelelo, yezinzuzo, njll idokhumenti okunjalo liyadingeka zigunyazwe umqondisi.
Kwenzeka ukuthi isidingo sokwenza izinguquko abasebenzi. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinhlangano esenziwa uhlobo wabo womsebenzi njalo ukushintsha isakhiwo kanye nendlela okwakheke ngayo isimo - ngokwesibonelo, izinhlangano wahlanganyela emsebenzini kwesizini. Uma izinguquko abasebenzi kwenzeka njalo ngokwanele, kutuswa ukuba sikhiphe izinombolo ahlukene kule uhlobo lombhalo futhi uqoke izincwadi zalo - isibonelo, "iphoyisa". Isevisi noma kwezinye izingxenye inhlangano liyadingeka aziswe izinguquko ezenziwe ukuthola amakhophi mbhalo. Yiqiniso, zonke ushintsho iza umphathi ulwazi futhi kuvunywe kuye.
kuphakama imibuzo eminingi maqondana inkokhelo ilungiswe abasebenzi. Ngakho, abasebenzi bangazihluphi okuthunyelwe esifanayo, musa ukubeka njalo zizohola alinganayo. Ixhumeke nezimfuneko isazi esithile, isipiliyoni yomsebenzi wakhe at inkampani, izinzuzo kanye nezinye izinhlobo izibonelelo. Lo mbuzo kuhlongozwa ukubhekana okulandelayo: iholo Ulungise ngokwesimiso sansuku tariff, emagrafu elandelayo wakhipha isici siqu, okuyinto ethatha zonke lezi izinto eziphathelene inkokhelo ku-akhawunti. Lesi isilinganiso ngubani ungase ukhule njengoba inkokhelo yangempela futhi uyinciphise kwenkathi ethile isikhathi (uma izinhlawulo ezibekwe izwe noma isivumelwano ngokuhlanganyela ibhizinisi). Ngo ukusebenza evamile abasebenzi ibhizinisi senziwa unyaka owodwa, ngemva kwalokho izichibiyelo ezidingekayo zenziwa - ngokuvamile ngenxa yezinguquko ngokuhlanganyela sivumelwano noma amadokhumenti ama-akhawunti, sokunquma iholo.
Kukhona test practice kwemibhalo normative ibhizinisi, ohlwini okuhlanganisa ulwazi mayelana amazwe. Uma inkampani noma ifemu akanawo lolu hlobo idokhumenti singasebenza yayo izinhlawulo. Ngokusho abameli, kuyimfuneko abasebenzi njengoba idokhumenti ingeyona izitatimende zezimali, kuvumela abahloli inselelo ukumangala okungenxa ezinkantolo. Kodwa, futhi, emazwini ochwepheshe, kuba lula kakhulu futhi ephephile nje ukuba abasebenzi - kulesi simo, umqashi insures yena kanye nezicelo kokuhlola kanye nezicelo bevela abasebenzi umlilo.
Ukufundisa njengoba ndlela yokufundisa izisebenzi. Siza ochwepheshe abasebasha e kulo msebenzi wakho omusha
Ikhanda Emsebenzini Inhlangano STO
Minerals Sakhalin: uwoyela, igesi kanye izinsimbi non-ayoni futhi ezingavamile. Sakhalin impumuzo
Kanjani ukubhala futhi lapho ukuthumela incwadi ukuze Santa Claus
Kungani iphupho blackcurrant? kuhunyushwa
Gel sula "Uno": Ukubuyekeza kanye nezincomo
I-Phraseologisms negama elithi "izinyo": izibonelo, okusho